Gbasara Anyị • Musatalent
Kedu ihe kpatara ịhọrọ MUSA
Anyị bụ otu ndị ọkachamara na-arụ ọrụ na ejiji, sinima na mpaghara telivishọn ruo ọtụtụ afọ, na-eme ka ndị chọrọ ịbata ụwa a nweta ọrụ nka ha. N'ihi nduzi nke nnukwu nna ukwu, anyị na-ebufe nka na uto nke Mere na Italy na ụwa! Otu egwuregwu kwenyere na ndị chọrọ ịpụ dị ka ọkachamara ọkachamara! Onye ọkachamara nwere ihe ọmụma nke usoro ọkachamara na ihe ọmụma banyere ngwaọrụ na ngwaahịa akọwapụtara ma mepụta ụdị, ejiji na ihe oyiyi.
Isi ihe ịga nke ọma!
Ogo na Ọkachamara
Onye ndu na uwa
Ulo akwukwo a na eji usoro nkuzi nke oge a. Ndi otu ndi nkuzi bu ndi isi site na ejiji, mmecha, uzo na onyonyo. Oké mmasị ha na ọkachamara ha na-enyefe ụmụ akwụkwọ ha ọmarịcha ọrụ nka. Guaranteemụta nkwa bụ ihe e kere eke nke ukwuu ọkachamara oge a videos. Ihe nzuzo niile nke ndị kacha ukwuu Nna-ukwu na ụlọ ọrụ ahụ nyefere gị, ọkachamara nke ọdịnihu!
N'ihi nduzi nke nnukwu nna ukwu, anyị na-ebufe nka na uto nke Mere na Italy na ụwa!
Ebuli oge gị na-enwe ike ipuiche enweghị na-eche ihu mmefu na njem, comfortably mgbe ị chọrọ na otú ị chọrọ!
Asambodo ahụ gosipụtara ikike ndị ọkachamara iji gosipụta ikike ndị enwetara, dị mkpa iji nweta ngalaba dịka: ejiji, ịma mma, ihe nkiri, egwu egwu, sinima, mgbasa ozi, ụlọ ahịa na ọtụtụ ndị ọzọ.
Anyị bụ ahuhu maka ịma mma! Anyị bụ ndị nna ukwu n'ụdị! Anyị bụ ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ na-enwe obi ụtọ site na ịmụmụ ọnụ ọchị na olile anya nke ndị na-achọ ime ihe na ndị na-ese ihe oyiyi!
Anyị bụ otu ndị ọkachamara na-arụ ọrụ na ejiji, ihe nkiri sinima na telivishọn ruo ọtụtụ afọ, na-eme ka ndị chọrọ ịbata ụwa a nweta ọrụ nka ha.
Wayzọ ọhụrụ ịmụta ọrụ mara mma. Inwe ike ịnweta ọzụzụ nke ọkwa ọkachamara kachasị elu mgbe ọ bụla ịchọrọ.
Ọzụzụ dị elu pere mpe ego!
A NA-ere nkuzi nkuzi
Ejiri akwụkwọ ikike
Nwere ike ịghọ ọmarịcha omenkà?
Ọ bụ iji zaa ajụjụ a na a mụrụ Musa Talent na mbụ, na-emepe echiche nke ọzụzụ dị elu na oge, dị ka onye nnọchianya nke oke ókèala, dịka Italytali na ụwa.
N’oge gboo, etinyere etemeete abụghị naanị site n’ime ka etinyere ahụ ahụ mma, mana ọ metụtara echiche na omenaala nke agbụrụ na agbụrụ dị iche iche.
Ejiji, nka na imewe
Lọ akwụkwọ ahụ na-arụ ọrụ ruo ọtụtụ afọ na ebumnuche nke ịfefe nka metụtara nka na nka nke ndị ahịa na-arịọkarị na ọkachasị ịgbasa iche na ụkpụrụ nke Mere na Italy, na-eme ememme zuru ụwa ọnụ na nke ọdịbendị niile. Ihe nketa Italiantali site na Ejiji, Art na Kere.
Ngwaahịa Ejiji na .wa
Ndị guzobere bidoro n'echiche bụ na ejiji na-emepụtaghari omume, omenaala na omenaala ndị mmadụ. N'ihi ya, echiche a banyere ụmụ mmadụ nke ejiji na-akọwa ihe kpatara mmepeanya ọ bụla na-ejikarị akara ngosi na njirimara dị mkpa na mgbe niile site na nka, nke bụ ọrụ mmadụ. Ya mere, e kpebiri ime ka omimi ndị ọzọ mikwuo emi karịa nke nke anam-elu artist, dị ka "uwe" na "Ejiji".
Art mụrụ na ịbụ!
Italy, ndị …tali… ndị Navigators, Inventors, Artists.
Italy… akwukwu nke alaeze Rom dị nsọ nke sitere n'okporo ụzọ
emewo ka mgbe nile ka a mara ndị niile nke ụwa ịke, ezi uto na
mkpa nke aesthetic mma.
Precursors nke ejiji na ọnọdụ.
Anyị na! Anyị bụ ndị pụrụ iche… na-enweghị atụ… mpako ịbụ.
Daalụ maka ịbụ ALItali WORLDWA!
Nyocha nke ụmụ akwụkwọ anyị
Dabere na nyocha 20
ghọtara site Facebook
Enyere m nkuzi m enyi nwanyị m mbọ. Ọ hụrụ ya n’anya wee sị na o nyere ya... ọtụtụ mmetụta uche. Nyaahụ o nwere onye ahịa mbụ ya ma ọ dị ezigbo mma ma onye ahịa ahụ nwere obi ụtọ! Daalụ Musatalent 😁❤gụọ ...
Ihe nkiri vidio mara mma, usoro a masịrị m nke ukwuu maka mụ onwe m na maka ebumnuche ọkachamara nyere ike... arịrịọ maka pen pen a. Akwadoro m ịntanetị maka agụmakwụkwọ a na enwere m ezigbo oge. Vidio ahụ dị mfe ịgbaso, doro anya nke ọma na karịa ihe niile akọwapụtara na nrube isi na njirimara ọkachamara niile dị mkpa maka usoro a, n'adịghị ka nkuzi DIY dị elu ma dị egwu dị na youtube. Super tụrụ aro !!gụọ ...
Enyere m nwunye m onyinye ma zụta vidiyo na-egosi usoro nke itinye usoro pen hyaluron, è... ezigbo obi uto. A na-eme nke ọma na onye nkụzi ahụ na-akọwa usoro niile yana nnukwu ọkachamara. Shots ndị ahụ magburu onwe ha ma doo anya na usoro ahụ na-enye gị ohere inyocha vidiyo ahụ ruo mgbe ebighi ebi na mgbe ịchọrọ ya. Ihe sokwa ya bụ akwụkwọ ederede mara mma edepụtara iji bipụta. Akwa price quality!gụọ ...
M na-edeghachi ahụmịhe m ka mhichapụrụ nyocha m. Azụrụ m hyaluron pen N'ezie, Vidio ahụ... ọ dị njọ, ndị na-ese foto na-atụ ụjọ ma na-elekwasị anya ma ọnọdụ nke itinye pen na egbugbere ọnụ nwa agbọghọ ahụ. Echere m na vidiyo YouTube bara uru karị ... Banyere pdf, nke na-adịchaghị mkpa, isi ihe fọrọ nke nta ka ọ ghara nghọta.gụọ ...
M zụtara hyaluron pen video N'ezie na atụmanya nke klas abịa, ọ bụ n'ezie mma na mma!... Onye nkuzi doro anya na nkwupụta ahụ ma a na-emeso usoro dị iche iche ka ọ bụrụ ezigbo nghọta ma dịkwa mfe ịgbaso! M ike na-eche ịga klas akụkụ partgụọ ...
Ekwesịrị m ikele Loris maka ịdụ m ọdụ na ụzọ ahụ na ndị ọrụ niile gbara ya gburugburu maka nzukọ a... N'ime usoro ọmụmụ ihe a, obi dị m ụtọ ịhọrọ Musatalent maka njem m na-ekele gị nke ukwuu maka nnweta gị ♥ ️ yana maka ndụmọdụ gị.gụọ ...
Super ọkachamara .. Ha na-arụ ọrụ na ahuhu! Ana m akwado ♥ ️
Ebe dị ọcha, otu ndị na-anabata ndị ọbịa nke ọma, nzukọ dị ọcha na nke na-enweghị ntụpọ... jikere..Ọzụzụ ọkachamara nke ọkwa dị elu.gụọ ...
Aghaghị m ikele gị maka ọrụ gị !!! dị oke egwu, dịnụ mgbe niile, ngwaahịa dị elu, gbakwunyere na ị na-eme ya... N'ezie ọmụmụ ihe dị oke ọnụ ahịa nwere ọnụ ahịa enwere ike ịnweta mmadụ niile.M ga-akwado gị ndị ọzọ! Anyị na-atụ anya inwe nkwado na ọdịnihu.gụọ ...
Ana m akwado ị were otu ma ọ bụ karịa n'ime usoro ọmụmụ Musatalent n'ihi na ha dị oke egwu! Na kwarantaini m nwere... Amataara m ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ a n'ezie, ya na ndị ọkachamara niile na-eme ya, achọrọ m ịnwale usoro etemeete. Nicezọ dị ezigbo mma, ọ dị mfe nghọta ọbụna maka ndị nọ na ụzọ izizi ụwa a. M mere ozugbo ahụ echiche n'ime omume na m n'ezie mma a otutu. Amalitere m ịme ihe ntecha maka ọrụ, obi dịkwa m ezigbo ụtọ. Ebe ọ bụ na ọ ga-abụrịrị na m ga-emeli ihe na-atọ m ụtọ ma nweta ego 😍Thanks Musatalent Academy, anyị ga-anụ n'ọnụ gị n'oge na-adịghị anya maka usoro ọzọ m ga-eme ugbu a!gụọ ...
Abụ m onye ọrụ ịchọ mma ọkachamara, atụgharịrị m agụmakwụkwọ a iji gbasaa nka m ma nwee m... ozugbo nyere ọkachamara kachasị ọrụ n'ịmụta ọkachamara dị iche iche n'ọhịa nke ịma mma na mma site na ndị nkuzi dị oke egwu na ndị zụrụ azụ. Enwere m afọ ojuju ka m gụchara akwụkwọ oge ọ bụla m nwere nzaghachi ọkachamara na akụnụba ozugbo. Daalụ Musatalent Academygụọ ...
Ndị ọkachamara hụrụ ọrụ ha n'anya, na-adị njikere mgbe niile ma dị njikere imelite anyị na ọrụ ha... ọgwụgwọ, nkọwa doro anya na nke bara uru maka ndị, dị ka m, dị ka ụwa a ⭐⭐⭐⭐⭐gụọ ...
Ezigbo ọmụmụ ihe dị iche iche .. Ndị prọfesọ nke usoro ọ bụla dị ezigbo njikere na ọkachamara .. Ana m akwado ya... niile ma ọ bụrụ na ị chọrọ n'elu nkwadebe!gụọ ...
Ana m akwado usoro ọmụmụ ahụ, ndị zuru oke, ndị nwere omume enyi, ọkachamara .. Ana m ekele ndị ọrụ niile.
Agara m abụọ na nkuzi dị iche iche nke Musatalent: microblading na Ialuronic pen. Nweta ihe omuma n'ubi... mara mma na Musatalent pụtara iji nwayọ ghọta nrọ nke inwe ikike na ezi ihe ọmụma na mpaghara ọ bụla nke ụwa aesthetics, ihe doro anya nke inwe nkwadebe na-enweghị atụ nke ndị nkuzi nyere abụghị naanị ndị ọkachamara kamakwa ndị nwere oke mmụọ na ikike na nkwukọrịta zuru oke iji nye ị bụ nkọwa dị irè nke nkọwa niile. Ha niile jupụtara na ile ọbịa, ọbụbụenyi, nkwanye ugwu na nnweta dị ukwuu iji na-akpọtụrụ maka enweghị obi abụọ ma ọ bụ nyocha ọ bụla. Ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ: uru maka ego. Ekwenyere m na maka izi ezi na ọrụ aka enyere ndị nkuzi kwesịrị ịkwụ ụgwọ karịa. Ọnụahịa Musatalent bụ otu maka nkịta na ezì na-eme nkuzi mana na-amaghị etu esi eme ha na enweghị afọ iri atọ na ahụmịhe n'ọhịa. Daalụ Musaaa!gụọ ...
Ezigbo ihe, ya na onye nkuzi nwere nnukwu ahụmịhe
akwa, ọkachamara na kwadebere !!!
Grandiiiiii! Ekele diri onye obula maka aka oru ya, okachasi Luna !! ! Obi dị m ezigbo ụtọ na m họpụtara gị... n'ihi na m na-agba ọsọ! B NUM ONYE! 😘😘😘😘gụọ ...
Abali oma onye obula .... aha m bu Francesca m si na Rieti ... Na mgbe gara aga agaram "ulo akwukwo" ekwesighi... Aha a n'ihi na o nweghi nkuzi na ihe ndị ọzọ ....! N'ikpeazụ, achọtara m gị, ezigbo ọkachamara, ezi omume na nkuzi! Agụmakwụkwọ m gara na ụbọchị anọ a bụ ihe kachasị mma na ndụ m! Onye nkuzi anyị Luna, onye ya na ọrụ ya, nkà ya na agụụ ya n'ihe ọ na-eme, emeela m ọgaranya maka ọdịnihu ọkachamara m. Daalụ maka ndị ọrụ ibe m maka ụbọchị ndị a dị oke egwu ... Ekele dịrị gị niile! Ahụrụ m gị n'anya! Ihe niile m mụtara n'oge a ga-abara m uru na ndụ m ọ bụghị naanị na mpaghara a! ahụmahụ pụrụ iche nke m ga-ebu mgbe niile n'ime obi m! Aga m atụ uche gị nke ukwuu! ❤❤❤❤❤gụọ ...
Ezigbo ọkachamara, nkuzi vidiyo nwere nkọwa doro anya ma dịkwa mfe. Kpamkpam tụrụ aro!
Ndị ọkachamara maka ọdịnihu gị
PMU Onye nkuzi na MUSA Ime
Onye Nkuzi MAKA-UP MUSA
Onye isi ihe nlere anya na ihe nlere anya
Ọzụzụ DIRECTOR MUSA
Onye nkuzi nkuzi